Wararka Maanta: Talaado, Jan 19, 2021-Jaaliyadda reer Hiiraan ee magaalada Nairobi oo la kulmay Guddoomiyaha Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed
Kulankaan oo ay si wadajir u soo qaban-qaabiyeen Axmed X. Cilmi Guure, Cabdulqaadir Sheekh Muumin iyo Maxamed Ganeey ayaa waxaa ujeedadiisu ahayd sidii Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ay xaruun uga furan lahayd magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Inta uusan guda-galin ujeedadii kulanka, ayaa Prof. Jimcaale wuxuu xasuusiyey jaaliyadda reer Hiiraan in wadjirka iyo mid-nimadda reer Hiiraan ay asaas u tahay hurumarka shacabka. Wuxuu sidoo kale Prof. Jimcaale sheegay in gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ay tahay meelaha ugu badan ee ay ka soo baxaan ardayda dugsiyada sare, loona baahay in ay helaan waxbarasho tayadeedu sarreeyso oo ay la sii hanaqaadaan ayaga oo jooga isla gobolka Hiiraan.
Prof. Jimcaale ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo marxaladii kala duwanaa oo ay soo martay iyo waliba dhibaatooyinkii laga kumlay. Wuxuuna sheegay in Jaamacadda hadda ay leedahay ilaa shan (5) xaruumood. Seddex (3) Xaroomood oo ka furan Xamar, xaruumu ka kala furan magaalooyinka Caabud-Waaq, G. Gal-Gaduud iyo Badhan, G. Sanaag.
Kulankaan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Mudane Cabdiraxmaan Aw-daahir. Wasiirka ayaa ka warbixiyey muhamadda ay leedahay in Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ay xaruun ka furato magaalada Beledweyne.
Jaaliyadda reer Hiiraan ayaa dhankooda uga mahadceliyey Guddoomiyaha waxeyna ballan-qaadeen in ay bilaabidoonaa olole ballaaran oo ay ku xaqiijinayaan sidii si deg-deg ah ay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed xaruun uga furan lahayd magaalada Beledweyne.
Kulanka guddoomiyaha ka dib, ayeey jaaliyadda iska soo dhex-saareen todobo xubnood oo soo diyaariyo kulan ballaaran oo ay jaaliyadda qayba-heyda kala duwan ka soo qayb-galaan.